तार्किक निष्कर्ष | मझेरी डट कम
kbs — Mon, 11/16/2009 - 18:51
भगतसिं दोस्रो पटक गाउँमा आयो बीस वर्षपछि ऊ पहिलो पटक गाउँ भएको थियो । त्यो चोटि भरियासहित आएको थियो । भरियाका पिठ्यूँमा जनतालाईं बाँड्ने चामल होइन, कागजका ठेली थिए । कागजका पन्नामा महफ्वपूर्ण कुरा लेखिएको थियो । साथमा दुईंचार जना अरू ठालुहरू पनि थिए ।
भगतसिं विधानसभा चुनावमा समानुपातिकको कोटामा परेको विधायक हो । उसले बीसवर्ष अघि नै गाउँ छाडेको थियो । पहिलो पुस्ताको नेताको चाकडी गर्दागर्दा 'ग' श्रेणीको ठेकेदारको लाइसेनस पाएको यिो । जनतालाईं थाहा थिएन - ऊ कहाँ बस्थ्यो । के व्यवसाय गथ्र्यो । ठेकदारीबाट ऊ मालामाल भइसकेको यिो । सहरमा राम्रो घर बनाइसकेको यिो । छोराछोरीलाईं सरकारी छात्रवृत्तिमा अमेरिका र अष्टे्रलियामा पढ्न पठाएको थियो ।
जनता अनविज्ञ थिए ऊ कुन पार्टीमा, कुन स्तरको काईंकर्ता वा नेता हो ।
कागजको भारी चौतारीमा बिसाएपछि भगतसिंले पोका खोल्यो । चौतारीमा दुईं दर्जन मानिस भेला भएका थिए । केही मात्र पढेलेखेका र धेरैजसो निरक्षर थिए । कागजको पोको फुकाएपछि उसले जम्मा भएका मानिसहरूलाईं एकएक पन्ना कागज दियो र भन्यो - 'हामी सहरबाट धेरै दुःखसास्ती सहेर तपाईंहरूकै विचार लिन आएका । सबैले आ-आफ्ना पानामा राम्रो विचार दिनुस् । तपाईंंहरूका लागि यस्तो कष्ट गरी उकालो ओरालो हिँडेर आएका छौँ । यो ऐतिहासिक अवसर हो ।'
जनताले आ-आफ्नो पानाहरूमा हेरे । कागजमा यस्ता प्रश्नहरू थिए -
सङघीयताबारे तपाईंंको धारणा के छ ?
शक्ति पृथकीकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? हाम्रो देशका कस्तो निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ ?
शासकीय अधिकार कोसँग रहनुपर्छ ? संविधानको प्रस्तावनामा के लेखिनुपछ ? ..............?
कागजका पाना हेर्दै जनता अलमल्ल परेका थिए । साठी प्रतिशतलाईं त 'कालो अक्षर भैंसी बराबर भयो ।' बीस प्रतिशतले कनीकुथी प्रश्नहरू मात्र पढ्न सके । बाँकी बीस प्रतिशतले प्रश्न बुझे तर उत्तर लेख्न कठीन भयो । आईं.ए. सम्मका अध्ययन गरेको कुन्दन भाइले भन्यो - 'हैन माननीयज्यू यी प्रश्नहरू स्नातकहरूको राजनीतिशास्त्र विषयका प्रश्न हुन् कि, संविधान लेखनमा सुझाव मागेको हो ? लेख्न त परै जाओस् बुझ्न पनि सकिएन ।'
सुझावकर्ता जनता कलम टोकेर मुखामुख गर्न लागे । विधायक भगतसिंले भन्यो - 'हामीलाईं जे गर्नु भनेर अह्राएको छ त्यै गर्दैछौँ । तपाईंंहरू पनि हामीले जे अह्राउछौँ त्यै गर्नुस् । तपाईंहरूको उचित सुभाव र रायले नै राम्रो संधिवान बन्छ । इतिहासमै कम आउने मौकाको सदुपयोग गर्नुस् । शान्ति प्रक्रियालाईं छिटो तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुछ ।
अर्को पढेलेखाले भन्यो - 'विधायकज्यू, उत्तर तपाईंले नै बताइदिनु पर्‍यो । तपाईंंले भने अनुसार नै लेख्छौँ हामी ।'
विधायक भगतसिं रिसायो - 'हामीले लेखेर हुनेभए माथि नै बसेर लेखिहाल्थ्यौँ नि । यति दुःख गरेर गाउँ गाउँ, अप्ठेरो बाटो हिँडेर किन आउथ्यौं । खुरुक्क लेख्नुस् । नजाने खाली नै बुझाउनुस्' जनता झनै अलमल्ल परे । एकछिन हल्लाखल्ला र गाँइगुँइ चल्यो । भगतसिंको नेतृत्वमा आएका अन्य विधायकहरू पनि अलमलमा परे । ती मध्ये कसैलाईं ती प्रश्नहरूको जवाफ आउँदैनथ्यो । सबै विधायक जहाँ जस्तो अवस्थामा छन् टपक्क टिपेर विधायक बनाइएको थियो । वातावरणमा अन्योल छायो । कसैले पनि प्रश्नहरूको जवाफ लेख्न सकेनन् । केहीले जे आउँछ केरकार पारेर बुझाए । धेरैले जस्ताको तस्तै बुझाए ।
भगतसिंलाईं जनतादेखि रिस उठ्यो -'यस्ता पनि जनता ! जसलाईं यति सजिला प्रश्नको उत्तर लेख्न पनि आउँदैन । के मत सङ्कलन गर्नु ?' कुन्दन उठेर बोल्यो -'यी प्रश्नले जनताको भावना समेटिँदैन विधायकज्यू, तपाईंंनै लेखेर लानुस् । सरकारी पैसाको नष्ट र कागज, छपाइ, भत्ता, राज्यको कति खर्च भयो होला ।'
विधायक भगतसिं कडि्कयो - 'तपाईंं चुप लाग्नुस् । हामी महान् अभियानमा हिँडेका । तपाईंंले त्यसो भन्न मिल्छ । छिटो तार्किक निष्कर्ष ...............'
कुन्दन बोल्यो -'नमिले कागज तपाईंंलाईं नै भो ।' उसले कागजको पाना विधायक अगाडि फालिदियो । सबैले त्यसै गरे । नब्बे प्रतिशत पानाहरू खाली बुझाइए ।
विधायक भगतसिं बोल्यो -'श्रीखण्ड हो कि खुर्पाको बींड । यस्ता पटमूर्खको अगाडि के बोल्नु । उठ्नुस् अर्को ठाउँमा जनता भेला भइसके होलान् । यो ठाउँमा जीवनमा फर्केर आउनु नपरोस् ।'
एकजना वयस्कलाईं रिस उठेछ, भन्यो -'नआए पनि हुन्छ । कहिले आउनु भएको थियो र । तपाईंं यहाँको माननीय बनेको कुरा त थाहा थिएन । तपाईंं कुन पार्टीको तर्फबाट बन्नुभएको ?'
विधायक भगतसिं झर्कियो -'आफ्नो क्षेत्रको माननीय कुन पार्टीको भन्ने नै थाहा छैन । यस्तो ठाउँमा के मत सङ्कलन गर्नु ?'
विधायकहरू र कारिन्दा उठे । कागज कोचकाच पारी पोको पारे । भरियाले कागज बोराको खाँद्यो । उनीहरू दक्षिणतिर लागे । जनता आ-आफ्नो घरतिर फर्किए । बाटोभरि कागजका प्रश्नहरूकै चर्चा गरे जनताले ।
विधायक दोस्रो पटक गाउँ आउँदा निकै हल्लीखल्ली मच्चियो । उनीहरू संविधानको मस्यौदाको ठेली लिएर आएका थिए । तामझाम पहिल्यै कै थियो । सबैले रुकस्याक बोकेका थिए । मिनेरल वाटरका बोतलहरू रुकस्याक माथि तेस्र्याइएका थिए ।
फेरि चौतारीमा केही मानिसहरू जम्मा भएका थिए । संविधानको मस्यौदा केहीलाईं बाँडियो । विधायक भगतसिंले भन्यो - 'हामी पुनः दुःखसास्ती सहेर गाउँमा आएका छौँ । संविधानको मस्यौदा पढ्नुस् तपाईंंहरूलाईं कस्तो लाग्यो, खाली पानामा राय दिनुस् । संशोधन गर्नुपर्ने भए यहाँ यस्तो लेख्नुपर्छ भनेर लेख्नुस् । तार्किक निष्कर्षमा ..............।'
त्यो पटक पनि कुन्दन उपस्थित थियो । उसले मस्यौदा पढ्यो । थोरै बुझ्यो । धेरै बुझेन । जात र भाषाको आधारमा प्रदेशहरू छुट्याउने आशयको मस्यौदा थियो । त्यो पनि अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको थियो । यसले झनै विभेद र झडप निम्त्याउँछ भन्ने कुरा उसलाईं थाहा थियो ।
उसले दरो प्रश्न तेस्र्याईं हाल्यो - 'यो तपाईंंहरूले के गरेको ? घरघरमा झगडा र झडप निम्त्याउन खोजेको हैन ? यही क्षेत्रमा एक दर्जन भाषा बोलिन्छन् । कसको भाषा कसले बुझ्छ । यो चाहिँ सरकारी काम चलाउ र सम्पर्क भाषा हुनेछ भनेर लेख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
अर्को बोल्यो -'भोलि बहुमतमा रहेकोले जातले अल्पमतकालाईं कस्तो व्यवहार गर्ला ? त्यति पनि सुझबुझ नभएका पनि कसरी विधायक बनाइन्छन् ।
विधायक बोल्यो - 'छिटो संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रियालाईं तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हाम्रो दायित्व हो । हामीलाईं कसेको व्यक्तिगत पूर्वाग्रह प्रति चासो छैन ।'
कुन्दन बोल्यो -'के तार्किक निष्कर्ष भनेको ?' भगतसिं बोल्यो -'तार्किक निष्कर्ष भनेको तार्किक निष्कर्ष हो ।'
ऊ स्टेरियो टाइपमा तार्किक निष्कर्ष मात्र भनिरहयो । जनता उठेर लाखापाखा लागे । भगतसिंको जमात उठेर फेरि दक्षिणतिर लाग्यो ।
कार्तिक २८, २०६६